စီမံရေးရာဦးစီးဌာန | Union Attorney General’s Office Skip to main content
စီမံရေးရာဦးစီးဌာနကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ ၁၆၈ အရ အောက်ပါ ဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည် -
၀န်ထမ်းရေးရာ နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
ဘတ်ဂျက်၊ ငွေစာရင်းနှင့် ထောက်ပံ့ဌာနခွဲ
စီမံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေများ ၁၆၉ အရ အောက်ပါလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်-
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်း များအား ခန့်ထားခြင်း၊ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်း၊ ခွင့်ပေးခြင်း၊ အငြိမ်းစားပေးခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ၀န်ထမ်းရေးရာကိစ္စများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန် ထောက်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဆု ချီးမြင့်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အင်အားစာရင်းချုပ်ကို ပြုစုခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိနှင့် ခရိုင်ဥပဒေ အရာရှိများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကိစ္စရပ်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ၀န်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဥပဒေရုံး အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ အမှုတွဲခန်းများကို စနစ်တကျစီမံထားရှိ စေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ လုံခြုံရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေရာရှိများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် လှုမှုရေးကိစ္စ များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ အမှုထမ်းဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်း၊ အကဲဖြတ် မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာနအသီးသီး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးစေခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများကို ပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အခါအားလျော်စွာ အထူးစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခြင်း၊
စာရင်းရုံးကစစ်ဆေးပြီး ပေးပို့သည့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှုကို စိစစ်ခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာနတွင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊
ဥပဒေရုံးများ၏ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းအရ ပေါ်ပေါက်သည့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်ကို ဆက်လက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး (ထောက်ပံ့နင့် အဆောက်အဦဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်)
(က) ဥပဒေရုံး အဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေရုံးများနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာရှာဖွေခြင်း၊ အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
(ခ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများအတွက် ရုံးအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးခြင်း
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများတွင် အသုံးပြုရန် မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
(ဃ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ၀န်ထမ်းများအတွက် မော်တော်ယာဉ် ကြိုပို့လုပ်ငန်းစီစဉ် ဆောင် ရွက်ခြင်း
(င) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံနှင့် ရုံးပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး (လေ့ကျင့်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်)
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ လေ့ကျင့်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) ရွေးချယ်ခန့်ထားပြီးသော အစမ်းခန့် ဥပဒေအရာရှိအသစ်နှင့် ၀န်ထမ်းအသစ်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်း ပေးခြင်းနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် စေလွှတ်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ၀န်ထမ်းမျာကို အရည်အချင်းတိုးမြှင့်စေရန် သင်တန်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်တွင်း ပြည်ပသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများသို့ ဥပဒေအရာရှိနှင့် ၀န်ထမ်းများ တက်ရောက် စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) သင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်က ပို့ချနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ပို့ချချက်အကျဉ်း ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊
(စ) နှစ်အလိုက်ဥပဒေစာအုပ်၊ နည်းဥပဒေစာအုပ်၊ ဘာသာပြန်ဥပဒေစာအုပ်၊ ဥပဒေလက်စွဲ၊ ဥပဒေရည်ညွန်းစာစောင်၊ ဥပဒေပညာဂျာနယ်နှင့် အခြားဥပဒေစာအုပ်စာတမ်းများ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း၊
(ဆ) ဥပဒေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းများပြုစုခြင်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်များကို လေ့လာပြီး မှတ်တမ်း ထားရှိခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာ သုတေသနစာတွဲများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေပညာဖြန့်ဖြူခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး စာကြည့်တိုက် ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို စီမံကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ဈ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို စီမံကြီးကြပ်ခြင်း
(ည) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အစီရင်ခံစာ၊ မှတ်တမ်း၊ အမိန့်နှင့် ညွန်ကြားချက်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး (ရုံးအဖွဲ့)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး(ရုံးအဖွဲ့)အား အဖွဲ့ခွဲ(၁)နှင့် အဖွဲ့ခွဲ(၂)တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်၊
အဖွဲ့ခွဲ(၁)သည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီသို့ ပေးပို့ တင်ပြလာသော တိုင်စာများအား ညွှန်ကြားချက် နှင့်အညီ ပြုစုတင်ပြခြင်း နှင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့(၂)လပတ်၊ (၆)လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများအား အကျဉ်းချုပ် ရေးသားပြုစုတင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ပါသည်။
အဖွဲ့ခွဲ(၂)သည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်ထံသို့ တိုက်ရိုက်လိပ်မူပေးပို့လာသည့် တိုင်ကြားစာ များအား ညွှန်ကြားချက် နှင့်အညီ စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်ရန် စိစစ်ပြုစုတင်ပြခြင်းနှင့် ၀န်ကြီးဌာနများသို့ လွှဲပြောင်း ခြင်း၊
နိုင်ငံခြား သံတမန်များနှင့် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် တောင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိစစ်တင်ပြခြင်းနှင့် ပြန်ကြားခြင်း၊
နိုင်ငံခြားသားများ လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်အခါ မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း၊ မှတ်တမ်းအဖွဲ့မှ ပြုစုပေးပို့ လာသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်အား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် နိုင်ငံခြား ရေးရာမှုဝါဒကော်မတီ (FAPC)သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ တင်ပြရန် အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြ ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သတင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဥပဒေရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများအပေါ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့်
ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့မှ ပြန်လည်ဖြေကြားသည့် စာများအားသက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းသို့ ဆက်သွယ် ပေးပို့ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့အား ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများက ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများက ဖြစ်စေ၊ လိပ်မူ ဖိတ်ကြားလာသည့် ဖိတ်ကြားစာအပေါ် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြန်ကြားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပါသည်၊
၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့သည် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ပြည်ပခရီးစဉ်များအပေါ် ခရီးစဉ်လိုက်ပါသူအဖွဲ့ဝင်များမှ ပြုစုပေးပို့လာသည့် ပြည်ပခရီးသွား အစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာ မူဝါဒကော်မတီ (FAPC)သို့ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိုင်ရန် အမှာစာပြုစုပေးပို့ တင်ပြခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာစနစ် ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီတိုးတက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ပေးသည့် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရေး၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဥပဒေ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကိစ္စရပ်များအား ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်း ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် နိုင်ငံတော်၏ e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ခေတ်နှင့်အညီပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော နည်းပညာရပ် များကို အသုံးပြုပြီး ရုံးလုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီး ယင်းကော်မတီအောက်တွင် လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
697539Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix